Ebubo isi mmalite maka ụdị Windows dị iche iche, gụnyere XP na Server 2003 | Site na Linux
Daysbọchị ole na ole gara aga weputara ozi banyere koodu mbu nke uzo di iche iche nke Windows, nke e gosipụtara n'ime izu.
N'ihe banyere izi ezi ya, ọdịdị nke koodu isi mmalite ndị a na-emeghe ụzọ maka ịmepụta iheyana onyunyo maka mmadu na ulo oru ndi n’aga n’ihu iji sistemu eji eme ihe ochie ndia.
N'ezie, ihe karịrị 1% nke kọmputa ụwa ka na-arụ ọrụ na Windows XP, dị ka Netmarketshare.
Faịlụ nwere ihe e chere na isi mmalite koodu Usoro ochie nke sistemụ arụmọrụ Microsoft: Windows 2000, Windows agbakwunyere (CE 3, CE 4, CE 5, CE 7), Windows NT (3.5 na 4), Windows XP, Windows Server 2003, MS DOS (3.30 na 6).
Gụnyere ebubo koodu Koodu nke ụfọdụ nke Windows 10.
Ọtụtụ faịlụ e leaked site a file na e leaked afọ tupu.
Dịka ọmụmaatụ, - koodu ntinye maka ụfọdụ Windows 10 components leaked online na 2017, ndị metụtara Xbox na Windows NT tupu afọ a. Ndị ọzọ, ọbụnadị nkwupụta ụda ochie nwere ike ịmaliteghachi na mkparịta ụka na listi nzipu ozi na ọgbakọ. nke malitere na mmalite afọ 2010. Ọfụfụ dị ugbu a bụ mkpokọta. Otú ọ dị,
Microsoft na-enye gọọmentị ohere ịnweta koodu isi nke sistemụ arụmọrụ ya maka gọọmentị nyocha na nchekwa na ndị otu nyocha agụmakwụkwọ maka nyocha sayensị.
Ọ bụ site na mpaghara ndị a ka nchapu ndị a nwere ike ịbịa. N'ọnọdụ ọ bụla, onye okike nke iyi na-ebipụta ma nye ntuziaka maka ojiji enwere ike iji ya mee:
“Nke a bụ iyi m. Ntinye XP / W2k3 mere taa (24th) na g na ọwa ndị ọzọ na 4chan.
O doro anya na ndị na-agba ọsọ nyefere faịlụ faịlụ na nzuzo ruo ọtụtụ afọ. Echere m na e kesara ya n'ihi na nwoke ahụ hụrụ na anyị na-anwa ịmebie faịlụ RAR (site na 2007 ma ọ bụ 2008) nke ga-enwe koodu iyi Windows XP. M jisiri ike gagharịa iyi ochie a iji nyochaa na anyị nwere otu faịlụ ahụ ewepụtara ọtụtụ afọ gara aga.
N'ọnọdụ ọ bụla, agbanyeghị na m amịpụtara faịlụ ndị ejikọtara site na iji usoro mkpakọ ndị ọzọ wee pịazie ha site na iji 7zip, agbanwebeghị m isi faịlụ ndị isi iyi a. Ha niile emebibeghị, ya mere mgbanwe ọ bụla enwere ike ịgbanwe na koodu Microsoft nyere na mbụ dị adị site na mbido.
Oge ụfọdụ, ntapu mmiri ndị a na-ese n’elu ọtụtụ faịlụ dị iche iche ka ewepụtara na ndekọ aha ndị yiri ha. Ederede m gụnyere na iyi na-enye gị ohere ịnwale nkwụsị ndị a ma ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere obi abụọ ọ bụla banyere iguzosi ike n'ezi ihe nke faịlụ ahụ. «
Ọfọn, ọtụtụ n'ime ndị na-agụ akwụkwọ ha ga-eche na nke a na olee uru. Maka ya anyị ga-eji achịcha dị ka ihe atụ nke ikpe a. Koodu isi dị ka uzommeputa ime achicha. Mgbe ịzụrụ achicha, naanị ị ga-enweta ngwaahịa ahụ na ọ bụghị uzommeputa (ya bụ, koodu isi). N'otu ụzọ ahụ ị na - enweghị ike ilele achicha ma chọpụta otu esi eme ya, weghachite koodu isi koodu naanị n'ihi na ị nwere sọftụwia ahụ dị oke mgbagwoju anya, ma ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume.
Maka ebumnuche dị iche iche, ọtụtụ sọftụwia dị ka igbe ojii- know maara ihe ọ na - eme ma dịka o si eme ya, mana a na-ezobe ihe ndị akọwapụtara. Ihe ngwanrọ mepere emepe bụ naanị iwu a, mana Microsoft na-azụ ahịa sọftụwia nwere ma ọ bụ mechie emechi.
Enwere ọtụtụ ihe kpatara koodu isi nke sistemụ arụmọrụ ndị a Ọ ga-adọrọ mmasị. Nke mbụ, ịnwe ha ga-enye onye ọ bụla ohere ịmepụta ụdị dị iche iche nke sistemụ arụmọrụ ndị a.
Naanị ị ga-ezo aka na ihe atụ nke achịcha dị iche iche iji ghọta otu esi enweta ya. Ọzọkwa, ọ na-eme ka ndị mmadụ ghọta otú usoro ndị a si arụ ọrụ. Ma enwere ike iji ya maka ezigbo ihe kpatara ya dị ka: ịmepụta Windows emulation software na Linux ma ọ bụ Mac, dịka ọmụmaatụ (ọ bụ ezie na ọ nweghị ike iji ya n'ihi ebumnuche ikikere).
Agbanyeghị, enwere ike iji ihe ọmụma a maka ebumnuche ọjọọ. N'ezie, ọ bụrụ na ejighizi usoro ochie nke sistemu eji arụ ọrụ nke ukwuu, nke bụ eziokwu bụ na ha nwere ike iji Windows 10 kerịta nnukwu koodu nke koodu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Ebubo isi mmalite eserese maka ụdị Windows dị iche iche, gụnyere XP na Server 2003
galarga elber dijo
mpịakọta bụ akụkụ iwu, ebe ọ bụghị onyinye nke koodu ahụ; onye ma ka nka ga-esi kwusi
Wine / ReactOS nwere ike irite uru na nke a ...
Onyinyechi nwankwo dijo
N'ụzọ megidere nke ahụ, Microsoft nwere ike iwe ha iwe na ha na-edegharị koodu ahụ (chee echiche banyere ya, nkwụsị ahụ bụ 43GB mana nke naanị 2GB bụ ezigbo koodu, ebe 30GB dị ọcha koodu ikike Microsoft, ndị ọzọ bụ atụmatụ aghụghọ nke Bill na coronavirus
Zaghachi Allan Herrera
Ọhụrụ ụdị nke faịlụ IPFS 0.7 nke usoro ekwesighi